DHAGEYSO Biyo la’aan baahsan oo ka jirta deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Biyo la’aan baahsan oo ka jirta deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud.
Star FM August 28, 2018
Deegaanka Gadoon oo ku dhawaad 40 KM dhanka bari kaga began magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto biyo la’aan saamayn weyn ku yeelada dadka deegaankaasi ku nool.
Mudo bil gudaheedka ayaa waxaa suuro gali waayay iskuday la doonayay in deegaankaasi looga hirgaliyo ilaa sadex Ceelbiyood maadaama ceelka halkaasi ku yaala oo la qoday ku dhawaada 30 sano ka hor biyihiisuna ay yar yihiin uusan dabooli Karin baahida dhanka biyaha ah ee ay wajahayaan shacabka deegaanka.
Deegaanka gadoon ayaa biyaha uu helo waxaa laga keenaa magaalada Dhuusamareeb oo masaafo dheer u jirta sidoo kale dadka halkaas ku nool waxay sheegeen in halka Foosto oo biyaha ah laga gado lacag aad u badan oo qaarkood aysan awoodin.
Wasiir ku xigeenka biyaha iyo tabarta maamulka Galmudug Maxamed Noor Diini iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa gaaray degeenkaasi Gadoon waxayna sheegeen inay halkaasi ku soo arkeen dhibaato ka dhalatay biyo la’aanta deegaankaasi ka jirta.
Wasiir ku xigeenka biyaha iyo tabarta maamulka Galmudug Maxamed Noor Diini ayaa wax laga xumaado ku tilaamay inaan lagu guulaysan dhowr iskuday oo la doonayay in deegaanka Gadoon looga qodo Ceelbiyoodyo wuxuuna sheegay inay wasaaradiisu shaqo joojin ku samaysay shirkada uu sheegay inay si suuq madow ah qandaraasyo ku qaadeen aana ku guulaysan qandaraasyadaasi wuxuuna hay’adaha caalamka ugu baaqay inay ceelal u qodaan dadka deegaankaasi.
Agaasiamah madaxtooyada maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Adan iyo qaar ka mid ah masuuliyiintaa deegaankaasi tagay ayaa sheegay inay aad uga xunyihiin dhibaatada shacabka ka soo gaartay biyo la’aanta ka jirta deegaanka Gadoon.
Waxayna dadka deegaankaas ka soo jeeda ee wax haysta ugu baaqeen inay u istaagaan sidii ceelal biyoodyo looga hirgalin lahaa deegaankaasi gadoon.
← Madaxweynaha dalka iyo dhigiisa Maraykanka oo ka wadahadlay ganacsiga iyo amniga
Maraykanka oo wacad ku maray inuu iska difaacayo iiraan →